Mamy Ravatomanga : Miresaka azy izao tontolo izao afa-tsy ny Bianco -
AccueilRaharaham-pirenenaMamy Ravatomanga : Miresaka azy izao tontolo izao afa-tsy ny Bianco
Efa nambara teto ihany ny hoe « hafahafa ity tale jeneralin’ny Bianco ity, mihazakazaka manao valandresaka an-gazety sy manao fanambarana miampanga avy hatrany raha vao olona ao anaty fitondrana, na akaikin’ny mpitondra no misy mitoroka eny amin’ny Bianco, fa moana tahaka ny trondro kosa rehefa avy amin’ny mpanohitra, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fitoriana napetrak’i Lalatiana Ravololomanana momba an’i Lalao Ravalomanana, indrindra moa fa mikasika an’i Mamy Ravatomanga ». Miverina mitodika any amin’ny Bianco indray anefa ny mason’ny mpanara-baovao ankehitriny, taorian’ny namoahan’ny gazety vahiny ny fanadihadiana nosokafan’ny governemanta frantsay amina raharaha famotsiam-bola sy kolikoly, ary fanodinkodinam-bolam-panjakana momba an’i Mamy Ravatomanga.
Efa naverina matetika teto ihany koa ity fanontaniana ity manao hoe : « lasa blanco hanadiovana ny mpanohitra sy izay rehetra miray petsapetsa amin’ny mpanohitra ve no antony hamatsian’ny Banky Iraisam-pirenena vola ny Bianco? ». Andrasana araka izany ny valandresaka na fanambarana fanao mahazatra ny Bianco amin’izao raharaha mikasika an’i Mamy Ravatomanga izao na dia efa maro aza ny miteny fa hanao izany mihitsy io tale jeneralin’ny Bianco io. Efa mazava tokoa mantsy ny resaka fa manao mizana mitanila ity tompon’andraikitra voalohany mitantana ny birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly ity, na ny antsoina amin’ny teny vahiny hoe « favoritisme » koa tsy ny tenany velively no ndeha hanao fanambarana na valandresaka an-gazety momba an’i Mamy Ravatomanga na haniry nify aza ny akoho.
Etsy andanin’izany rehetra izany, tsatok’antsy ho an’ireto solombavambahoaka MAPAR sy TIM milaza ny miady amin’ny kolikoly ihany koa iny lahatsoratra nivoaka tany Frantsa farany teo iny. Amin’ny fomba ahoana tokoa moa hitoriana ny mpamatsy vola, amin’ny fomba ahoana no hiadiavana amin’ny mpandoa-bary? Dia mitanjaka eo imasom-bahoaka fa resa-be sy ronono an-tavy fotsiny ihany ilay hoe « ady amin’ny kolikoly », fa fanonganam-panjakana no tena marina. Rossy, Naivo Raholdina, me Hanitra ary Roberto Tinoka, raha tena ady amin’ny kolikoly marina tokoa no manosika azy ireo ho etsy amin’ny lapan’ny tanàna, no hihazakazaka eny amin’ny Bianco hametraka ny fitoriana, taorian’io lahatsoratra mazava be navoakan’ny gazety frantsay momba an’i Mamy Ravatomanga io. Fa tena tsatok’antsy ho an’ireo depiote mpanakorontana fiainam-bahoaka ireo mihitsy ilay lahatsoratra, mitanjaka eo imasom-bahoaka ankehitriny ilay fitaka nentina nandrebirebena ireo mpianatra nandao sekoly, ireo mpiasam-panjakana nanantena volana sy kintana.